Da’ayarka kooxda Real Madrid ee reer Brazil Vinícius Jr oo difaacay go’aanka tababare Julen Lopetegui – Gool FM
(Real Madrid) 26 Okt 2018. Da’ayarka kooxda Real Madrid ee reer Brazil Vinícius Júnior ayaa difaacay go’aanka tababaraha reer Spain ee Julen Lopetegui.
Wargeyska “Marca” ayaa daabacay wareysi uu bixiyay Vinícius Júnior, wuxuuna xaqiijiyay inuu isaga codsaday inuu kasii ciyaaro Castilla, si uu ula qabsado islamarkaana uu helo qibrad badan.
“Waxaan ku soo qaatay kooxda koowaad kulamada diyaar garowga, kahor bilawga xili ciyaareedka, waan ogaaa inaan ka qeyb qaadan karo Castilla”.
“Waxaan door biday inaan kusii sugnaado Castilla, inta aan ku sugnaan lahaa guriga, taasi waxay iga caawineysaa inaan la qabsado cimilada, qaabka ciyaartoyda iyo wax walba ee aan u baahanahay ka ciyaaryahan ahaan”.
Laakiin Vinícius Jr ayaa seegi doono kulanka kulanka xiisaha badan El clasico ay Axada ku wada ciyaari doonaan kooxaha Barcelona iyo Real Madrid garoonka Cump Nou, sababa la xiriira inuu qaatay kaarka roosaha kulankiisii ugu dambeeyay ee kooxda Real Madrid Castilla.
Kooxda reer London ee Arsenal oo guul muhiim ah kaga gaartay kooxda Sporting CP kulankii tartanka Europa League